Shiinaha 400-600 warshad wax soo saar dhogorta dhalaalaysa iyo alaabada iibiya | Hongli
Loogu talo galay cirbadaha tooska ah iyo dib u soo celinta khadadka wax soo saarka meltblown ee macaamiisha oo leh tilmaamo gaar ah oo u dhexeeya 400mm - 1600mm. Khadka wax soo saarka dib-u-soo-celinta waxaa loo isticmaali karaa oo keliya soo-saarista dharka dharka meltblown, laakiin sidoo kale soo-saarka walxaha filterka dareeraha ah iyo qalabka filterka hawada. Qalabka filterka dareeraha ah waxaa badanaa loo isticmaalaa dhinacyada daaweynta biyaha, batroolka iyo warshadaha kiimikada, oo leh qaab isku mid ah, saxnaan sareeya sare leh, saameyn muuqata, iyo wasakhda xoogan ee awooda iyo nolosha adeegga. Qalabka filterka hawada waxaa badanaa loo isticmaalaa nidaamyada nadiifinta hawada, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn nadiifinta hawada gudaha, shaandhaynta hawo qaboojinta, iwm. Waxay leedahay faa'iidooyinka wax ku oolka sare iyo awoodda boodhka sare.
Mabda 'teknolojiyada ah ee buufinta dhalaalid
Nidaamka aan dhalaalaynin-dhalaalineysaa waa in la isticmaalo hawo xawaare kulul oo kulul si loo soo jiido qulqulka dhuuban ee polymer dhalaalaya ka soo baxa lafdhabarta madaxa dhinta, kaas oo ka sameysan fiilooyinka 'ultrafine' ka sameysan oo iskuxiran shaashadda goobta non-tolmo by is-xirid.
Dhamaan qadka wax soo saarka dhalaalaya oo dhan wuxuu ka kooban yahay qalabka daboolka leh, matoorka qalabka wax lagu buufiyo, tuubbada dhalaalaysa, madaxa dhinta dhalaalaya, kuleylka hawada, aaladda nuugista, mid wuxuu helayaa shabaqa, shaandhada, xirmo elektaroonig ah iyo hal set oo ah mashiinka is-toodinta iyo mashiinka dib-u-soo-noqoshada. Qaybahaas dhexdooda, midka ugu muhiimsan waa madaxa dhinta dhalaalaya.
Nidaamka polymer wuxuu dhalaalayaa nidaamka qaybinta. Nidaamkani wuxuu xaqiijinayaa in polymer dhalaalku si isku mid ah ugu qulqulo jihada qotodheer ee dhalaalaysa isla markaana leh waqti xajin isku mid ah, si loo hubiyo in biraha dhalaalaya ee aan googooysnayn ay leeyihiin hanti isku mid ah oo ballac ah oo dhan. Waqtiga xaadirka ah, nooca nooca polymer-ka dhalaalaya nidaamka qaybinta dhalaalaya waxaa badanaa loo isticmaalaa hannaanka buufinta. Sababta oo ah nooca qaybinta nooca-Nooca ah si siman uma qaybin karto dareeraha. U-ekaanta isku buufin dhaldhalaanta waxay si dhaw ula xiriirtaa dhimashadii madaxa dhalaashay. Guud ahaan, sahaminta mashiinka dhalaalaya ayaa sarreeya, marka dhimashadu waa qaali in la soo saaro. Kuleyliyaha hawada, khadka wax soo saarka dhalada dhalaalaya waxay u baahan yihiin hawo badan oo kulul. Soo-saarista hawada cadaadiska ee ka timaada compressor-ka hawada waxaa loo gudbiyaa kuleylka hawada si loogu kululeeyo ka dib marka la nadiifiyo nadiifinta ka dib, ka dibna loo wareejiyo kulanka dillaaca dhalaalka. Kuleyliyaha hawadu waa markab cadaadis, isla mar ahaantaana u adkaysanayo uumi-baxa hawada kuleylka sareeya, sidaa darteed maaddadu waa inay ahaataa bir aan nadiif ahayn.
* Waa otomatik buuxa laga bilaabo quudinta maaddada illaa gunta dhalaalaysa ee isku-dhafka ah, tikniyoolajiyad baaluq ah, orod xasilan, PFE waxay gaari kartaa 90 iyo wixii ka sareeya.
* Awoodda wax soosaarka 200kg ~ 300kg, awoodda waxsoosaarka saxda ah waxay kuxirantahay mashiinka fidsan iyo cabirka caarada.
5.Degida Balac: 400 ~ 600MM
6. Awooda Waxsoosaarka: 200kg ~ 300kg
7.Designed Max. Xawaaraha: 25M / daqiiqaddii
8.Taalinta Awoodda: ≤50KW
1.55 Kordhin Fudud oo Fudud: 1set
3. Cadaadiska Cilmiga Gaarka ah
4. Aar Qalabka kuleylka ka hor
7. Qalabka Cimilada Dhexdeeda
2. Qaybaha Shisheeyaha: Qaar ka mid ah qaybaha Gabalka ah sida isku xirka, saxanka kuleylka